नेविसंघ सुधार्ने जिम्मा कसको ? - Naya Patrika
सुशील भट्ट काठमाडौं, २ फागुन | फागुन ०२, २०७४
पछिल्लो समय राजनीतिक वृत्तमा कांग्रेसले हालै सम्पन्न तीनै चरणको निर्वाचनमा व्यहोरेको हारको समीक्षा भइरहेको छ । कांग्रेसको हारका पछाडि विभिन्न कारण औँल्याइएका छन् । नेतृत्वको अक्षमता, कमजोर सांगठनिक उपस्थिति र भ्रातृ संस्थालाई चलायमान बनाउन नसक्नुलाई कांग्रेसको हारको कारण ठान्नेहरू धेरै छन् । तर, के कांग्रेसका भ्रातृ संस्था चलायमान छन् त ? वा उनीहरूको संगठन त्यति चुस्त छ त ? तिनले माउपार्टीको चुनावी नतिजालाई फेरबदल गर्न सक्ने ल्याकत राख्छन् त ? यो प्रश्न अहिले कांग्रेसका भ्रातृ संगठनले आफैँलाई सोध्ने वेला भइसकेको छ ।
कांग्रेसको नर्सरीको रूपमा रहेको नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) आज इतिहासको कमजोर मोडमा आइपुुगेको छ । कुनै समय यस्तो थियो, कलम र मसालअंकित झन्डा सडकमा नफहराएसम्म विद्यार्थी आन्दोलनले उचाइ लि“दैनथ्यो । झन्डै ५ दशक पुग्न लागेको नेविसंघको इतिहास यति गर्विलो छ कि सबै किसिमको परिवर्तनको नेतृत्व उसले गर्दै आएको छ । तर, विडम्बना, आज विद्यार्थी आन्दोलनको नेतृत्व त परैको विषय, संगठनमै एकता कायम गर्न नेतृत्वले नसक्दा नेविसंघ नै गुट र उपगुटमा विभक्त भएको छ । झन्डै १० वर्षपछि निर्वाचनमार्फत नेतृत्व पाएको नेविसंघमा नयाँ ऊर्जा उत्पन्न हुुने आमविद्यार्थीमा आशा थियो । त्यहीअनुरूप अधिवेशनलगत्तै पहिलो बैठकमा हरेक क्याम्पस र विवादित जिल्लाको समस्या हल गर्ने भनियो पनि । आज निर्वाचन सम्पन्न भई नयाँ नेतृत्व आएको १७ महिना बितिसक्दा पनि विवाद हल भएको छैन, बरु टीके नेतृत्व छान्दा अन्यत्र पनि विवादको लहरो तानिएको छ । काठमाडौं उपत्यकाका २० भन्दा बढी प्रमुख क्याम्पसमा नेविसंघ नेतृत्वविहीन छ । यस्तै देशभरमा ३४ जिल्ला समिति रिक्त छन् भने अन्य जिल्ला समिति दुुई वर्ष नाघेर विधानतः अधिवेशन गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् । औँलामा गन्न सकिने केही जिल्ला र क्याम्पसबाहेक धेरै क्षेत्र, जिल्ला र क्याम्पस निष्क्रिय छन् ।
११औँ महाधिवेशनपश्चात् पहिलो बैठकले संगठन सुदृढीकरण र समन्वयका लागि विभिन्न कार्यदल गठन ग¥यो, जसमा संविधान कर्यान्वयनका लागि दबाब अभियान, शैक्षिक गुणस्तर, स्ववियु निर्वाचन आदि विषय समेटिएका थिए । तर, जनमानसमा देखिने गरी यी कार्यदलले काम गर्नु त परको विषय, बैठक बसेकोसमेत जानकारी छैन । केन्द्रीय समितिको दोस्रो बैठकमा आइपुुग्दा मर्यादाक्रमको विषयलाई लिएर हामीबीच द्वन्द्व सुरु भयो । जसबाट बैठक नै दुुईवटा स्थानमा बस्ने परिस्थिति बन्यो । लामो अन्तरालमा हुने भनिएको स्ववियु निर्वाचनमा टिकट वितरण कार्यदल नै विधानविपरीत बन्यो, जसमा उपत्यका र प्रदेशका सहमहामन्त्री नै परेनन् । उम्मेदवार छनोटमा देखिएको विवादका कारण विभिन्न क्याम्पसमा तालाबन्दी गर्ने परिस्थिति सिर्जना भयो ।
दोस्रो बैठकबाटै विभक्त नेविसंघ प्रशिक्षणको नाम दिएर तेस्रो बैठक राखियो । तर, मातृपार्टी कांग्रेसले बनाएको नेविसंघ निर्देशन समितिको भाषण सुन्ने थलोका रूपमा मात्र तेस्रो बैठक सकियो । त्यसयता आजसम्म कोठामा दुुई–चारजना साथीको भेटघाटबाहेक बैठक बस्न सकेको छैन । संगठन सुदृढीकरणका लागि न त बैठक बस्न सक्यो । बरु प्रदेश र क्षेत्रगत तहबाट भएका कार्यक्रमलाई नै स्पष्टीकरणका नाममा झनै धुु्रवीकृत बन्ने अवस्था सिर्जना गरियो । निर्वाचित केन्द्रीय समितिको आकर्षक कार्यक्रमको रूपमा जहाँ विद्यार्थी, त्यहाँ नेविसंघ भन्ने नारासाथ त्रिचन्द्र क्याम्पसबाट पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको उपस्थितिमा शुुभारम्भ गरिएको सदस्यता वितरण महाअभियान केबल औपचारिकतामा मात्र सीमित बन्न पुुग्यो । जिल्ला, क्षेत्र, क्याम्पस, सिटिइभिटी र माविसम्म पुु¥याउने लक्ष्य लिइएको सदस्यता वितरण महाअभियान त्रिचन्द्रको प्रांगणबाहिर आउनै सकेन । केन्द्रीय समितिमा निर्वाचित भएको एक सदस्यको हैसियतले यी सब कार्य हुनुमा आपूmलाई पनि दोषको भागीदार ठान्नुबाहेक थप केही गर्न नसकिने अवस्थामा पुगिएको छ ।